Ndiyo uchitsanya Zvitima In Europe And The World | Save A Train
musha > Travel Europe > Ndiyo uchitsanya Zvitima In Europe And The World
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba Hungary, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Portugal, Rovedza Kufamba Spain, Rovedza Kufamba Sweden, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Travel Europe
Wati aida kushanyira Europe ne chinhu mazambiringa, sezvinoita chitima? Inonzwika sei kuenda kumusoro 300 makiromita paawa? Europe ine guru richikurukura mukuru-nokukurumidza nezvitima kuti achatora iwe nokukurumidza nokwawaienda. High-nokukurumidza chitima mabasa chete kumisa mumaguta huru. The zvitima kupa hwomutambarakede ngoro kuti 1st uye neboka 2nd, uyewo zvakanaka Eenhede Services. Heunoi zvakawanda pamusoro ari uchitsanya nezvitima mu Europe.
The Alfa Pendular nzendo achitevedza mhenderekedzo Portugal, kubva Braga kuna Faro uye anomira kuPorto, Coimbra, uye Lisbon. In pasati 6 maawa, unogona kusvika mhiri kunyika uye kunakidzwa zvivako kwazvo mundege.
Alvia Anorovedza mu Europe
The Alvia, Ko Spanish uchitsanya Zvitima mu Europe kurwa, madaro marefu ari aimhanya kusvikira 250 makiromita paawa. Kuwedzera unobva chikuru maguta Spain, chitima ichi anopawo Amenities ano. Avo vari guru Reclining nezvigaro pamwe kupfuura nzvimbo yakakwana yokuti makumbo, Kumbofungatira tafura, uye maCD nemavhidhiyo outputs.
Ice nezvitima mu Europe batanidza mumaguta ose makuru muGermany uye mumaguta mazhinji munyika dzakavakidzana. Izvi ano mukuru-nokukurumidza chitima pamwe nenguva basa inopa zvizhinji: nezvimwe zvinhu, ngoro pamwe mhepo kutonhodza, guru nzvimbo kutambanudza makumbo, Video sefa uye zvakarekodhwa nehurongwa. Iyo ICE inokutora iwe chero kupi kuGerman uye inzira yakanaka yekufamba kune dzimwe nyika, zvakaita se Ositiriya, Furanzi, uye Siwizarendi.
Arrows nezvitima (kare sezvo Eurostar Italia) vanoumba boka ano mukuru-nokukurumidza uye ndivo Italian kurwa vari uchitsanya Zvitima mu Europe. Travel pamwe Arrows kunakirwa kukurumidza kubatana mwoyo mumaguta mazhinji Italian akadai Rome, Venice, Florence, Milan, Verona, uye Naples. Kune mhando nhatu Le Frecce nezvitima kuti chokwadi here uchitsanya zvichibvira kubatana kwete chete kune zvikuru nevanhu mumaguta Italy asiwo mumaguta diki Italian mumaruwa.
Eurostar riri pasi pagungwa weNobel nokuda uchitsanya Zvitima mu Europe
The Eurostar mukuru-nokukurumidza chitima ndiyo yakanakisisa chingaitwa vaifamba kubva London kuna kweBrussels kana Paris. chitima Izvi achakutora kuburikidza Channel Tunnel kuti mwoyo London. Travel pemvura apo vachinakidzwa zvose hwomutambarakede munhu ano mukuru-nokukurumidza chitima.
Izvi mukuru-nokukurumidza nezvitima vanomhanya pakati Austria, Czech Republic, Jerimani, Hangari, uye Switzerland. Railjet nezvitima vari mamiriro-of-nounyanzvi mienzaniso kuti kupa monyorora kuti ruzivo kufamba nokupa mukuru-nokukurumidza basa nokunyaradzwa zvikuru. Chaizvo onboard zvivako uye mabasa kwazvo ndivo zvimwe. Aimhanya kusvikira 230 makiromita paawa vari zvasvika. The Railjet kunoita waizoenda yose Austria uyewo nyika dzakavakidzana dzakadai Germany, Siwizarendi, uye Hungary.
TGV – Ko Sarudza yedu uchitsanya Zvitima In Europe
Uchishanda zvose pamusoro France uye mberi, TGV akabata nyika nokukurumidza rekodhi kwakajairika nezvitima. On 3 Kubvumbi 2007, TGV POS chitima chasvika 357.2 mph (574.8 km / h), zvichiita wechishanu uchitsanya chitima mu Europe. TGV trainset haana kunyange asvika 515.3 km / h (320 mph) pasi chaiyo bvunzo ezvinhu uye haana dzakaparadzaniswa okunze zvakadai gobvu bvungapfunga kana zvimwe.
Train à Grande Vitesse achatora iwe uri da chitima rwendo kuna Paris kana kwese pamwe muMediterranean nemahombekombe kana iwe saka, ndapota. Kutenga TGV tikiti uye kubata firimu munyika yakakurumbira Cannes uye vanakidzwe yemizambiringa yakanaka of Loire Valley, pashure. Wedzera zvishoma kutsika atasve wako kushanyira maguta akadai Marseille, Lyon, uye Bordeaux.
Montpellier kuna Marseille Zvitima
Nice kuna Marseille Zvitima
Paris kuna Marseille Zvitima
Lyon kuna Marseille Zvitima
The SJ Swedish mukuru-nokukurumidza imwe uchitsanya nezvitima mu Europe zvakagadzirirwa zvakananga kuti Air nomunzvimbo dzine uye run ari kumhanya anosvika 200 makiromita paawa. nezvitima izvi kupa refu azvipire nyaradzo uye tendera waizoenda kukurumidza kusvika pakati mumaguta mazhinji Swedish akadai Stockholm, Gothenburg, uye Malmo. Izvi mukuru-nokukurumidza nezvitima uyewo kufamba zvakananga Copenhagen (Dhenimaki) nomukombiyuta chakarebesa mugwagwa uye njanji bhiriji Europe, zvinooneka Oresund zambuko.
New uye mazambiringa pane imwe - the uchitsanya nezvitima mu Europe kupa kuti mukana. Sarudzai chitima kubva pamazita kumusoro tine chokwadi uchawadzana ruzivo masvika.
Unogona bhuku nezvitima dzenyu matikiti pakati uchitsanya nezvitima mu Europe iri Save-A-Rovedzai kusvika ose kuenda wechi pamusoro mu 3 maminitsi, panguva yakachipa pashiri chitima matikiti prices uye kutorerwa obnoxious Réservation yechikoro!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhich-are-the-fastest-trains-in-europe-and-the-world%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#fasttrains #highspeedtrain chitima mazano Train Travel
Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba Denmark, Rovedza Kufamba France, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Portugal, Chitima Kufamba Scotland, Rovedza Kufamba Spain, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe, Kufamba Iceland